कस्ताे छ मंसिर ४ गते बिहीवारकाे दिन तपाईकाे राशिफल — Sanchar Kendra
कस्ताे छ मंसिर ४ गते बिहीवारकाे दिन तपाईकाे राशिफल
मन उत्ताउलो हुन सक्छ । रतिराग बढाउने समय छ । विपरित वर्गसँगको आकर्षण बढ्नेछ । कल्पना र भावनामा केन्द्रित भइने छ । बोलीको विपरीत अर्थ लाग्न सक्छ, बोल्नअघि धेरै सोचविचार गर्नुहोला । चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्नुपरे पनि बुद्धि विवेकले काम गर्न सकिनेछ।
नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ । धन आर्जनका स्रोत फेला पर्नेछ । बेसुरमा दिइएको वचनले अप्ठ्यारो पर्नेछ । शरीरमा उत्साह र उमङ्ग प्राप्त हुनेछ । स्वास्थ्य सबल रहनेछ र काममा पनि फाइदाको योग छ । चिताएको काममा सोचेजस्तै सफलता मिल्नेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिलो हुनेछ।
आफन्तबाट टाढिनुपर्ला । व्यवसायमा लगानी बढाउनुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। लाभप्रद कामले लोभ्याए पनि फजुल खर्च हुन सक्छ। अवसरका लागि कडा परिश्रम गर्नुपर्ला। देश-विदेशको यात्रा गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । छर-छिमेकमा असमझदारी देखिनेछ भने बेसुरको काममा अलमलिनुपर्ला। स्वास्थ्यमा समस्या देखा पर्ने देखिन्छ ।
आँटेको कामको लगानी पनि अरूका लागि खर्च हुन सक्छ। सरसापटमा धन बाहिरिने देखिन्छ आम्दानी रोकिनाले कर्जाको रकम लिनुपर्ने हुन सक्छ। प्रगतिमा ईर्ष्या गर्नेहरूले अवरोध पुर्‍याउन सक्छन्।
आज २०७७ मंसिर १६ गते मंगलबार, यी राशिका लागि हुनेछ एकदमै शुभ, कुन राशिलाई छ तनाव ?
आज २०७७ मंसिर १४ गते आइतबार, यी राशिका लागि हुनेछ एकदमै शुभ, कुन राशिलाई छ स्वास्थ्यमा गडबडी ?
आज २०७७ मंसिर १३ गते शनिबार, यी राशिका लागि हुनेछ एकदमै शुभ, कुन राशिलाई हुनुपर्ने छ सजग ?
आज २०७७ मंसिर १० गते बुधबार, यी राशिका लागि हुनेछ एकदमै शुभ, कुन राशिलाई छ तनाव ?
कस्तो छ मंसिर ३ गते बुधबारको दिन, पढ्नुहाेस् तपाईंको राशिफल